မုန်းချောင်းဘေးတစ်လျှောက် ရွာတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး ဝင်ပေးပါ ~ Myaylatt Daily.
မုန်းချောင်းဘေးတစ်လျှောက် ရွာတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး ဝင်ပေးပါ
Tin Aung Htun and5others shared Yangon Media Group's post. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ပွင့်ဖြူရေဘေးဆိုလို့ ပွင့်ဖြူတို့ ရှောက်တောတို့ဆိုတာ မြို့ကြီးရွာကြီးတွေ ဖြစ်သလို မုန်းချောင်းနဲ့လည်း သိပ်ကပ်လွန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပွင့်ဖြူပေါ့။ Township မြို့ဖြစ်တဲ့ ပွင့်ဖြူဟာ မုန်းချောင်းနဲ့ မကပ်လှပါဘူး။ ဒါတောင် ခု မြို့က ရေ မြုပ်နေပါပြီ။
ပွင့်ဖြူအောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ် မရောက်ခင်အထိ မုန်းချောင်းတစ်လျှောက် ရွာပေါင်း ဆယ်ဂဏန်း အတော်များများဟာ ရေနစ်နေပါပြီ။ လူနဲ့ ကျွဲနွားတွေ အဓိက လွတ်အောင် ရုန်းနေကြပါတယ်။ မုန်းချောင်းဘေးတစ်လျှောက် ရွာတွေဟာ ပြေးစရာ မြေမရှိတာမို့ ရေကလည်း ဆက်တိုးနေတဲ့ အနေအထားမှာ သက်ဆိုင်ရာက အသက်အန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေး အမြန်ဆုံး စသင့်ပါပြီ။ ရွာတွေကို အာရုံစိုက်ပေးပါ။ အသက်ဘေးကျစတမ်းဆိုရင် ပွင့်ဖြူ ရှောက်တော ထက် မုန်းချောင်းတစ်လျှောက်က ရွာတွေရွာတွေ ဒုက္ခရောက်ကျမှာပါ။ အခု အခြေအနကေ မုန်းချောင်းအပေါ်က ဆည်နှစ်ခု မကျိုးသေးပါဘူး။ ကျိုးမလား ဆည်မြောင်း အရာရှိများ ရင်တမမ စောင့်နေရတဲ့ အနေအထားပါ။ မိုးကလည်း ဆက်တိုက်ရွာနေသလို ဆည်မှာလည်း ရေဝင်တိုးနေတာပါ။
စန္ဒကူးနံ့သာ ကျောင်းတော်ရာဘုရား အနားက ရွာတွေဖြစ်တဲ့ သစ်တော်၊ မင်းမြေ၊ ကွက်သစ်၊ မင်းလှ လို ရေလာရင် ကုန်းပေါ်တက်ပြေးစရာ ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ရွာတွေ အခု စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချောင်းရေနဲ့ ကုန်းမြေကို အတားအဆီးလုပ်ပေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က ဖောက်ခဲ့တဲ့ ဆည်မြောင်းပေါ်ကို ရေစကျော်နေပြီ ဖြစ်သလို ဆည်မြောင်းဟာ နေရာကွက်ကြား ကျိုးနေပြီမို့ အရင် ရေဆိုးဆိုးရွားရွား ကြီးစဉ်က ဆည်မြောင်းဘောင်ပေါ် ရှောင်လို့ရခဲ့တဲ့ အနေအထားမှာ ခု စိုးရိမ်နေရပါတယ်။
ဆည်မကျိုးသေးတာတောင် ရွာတွေမှာ ရေက လည်ပင်း ခါး စသည်ဖြင့် ရောက်နေပါပြီ။ မုန်းချောင်းနဲ့ အနည်းငယ်လှမ်းတဲ့ ကျွန်တော့်ရွာ (မင်းမြေ) မှာတောင် ရွာအရှေ့ပိုင်းမှာ ရေက လည်ပင်းအထိ ရောက်နေပါပြီ။ ဆည်များ ကျိုးခဲ့ရင် .. frown emoticon ။
လက်ရှိအခြေအနေအရ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကို ရောက်နိုင်တဲ့ လမ်းနှစ်ခုလုံး ရေနဲ့ ပိတ်နေပါပြီ။ အရပ်ဘက် အဖွဲ့တွေ ဝင်ဖို့ခက်သွားပါပြီ။ မကွေးကနေ ဝင်လို့ မဖြစ်တော့သလို ချောက် လမ်းကြောင်းကနေလည်း ဝင်မရတော့ပါဘူး။ ပွင့်ဖြူနဲ့ သူ့ရွာတွေဟာ ရေထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ အနေအထားပါ။ အစိုးရက ကယ်ဆယ်ရေး ဝင်မှ အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားပါ။
မုန်းချောင်းဘေးတစ်လျှောက် ရွာတွေကို အမြန်ဆုံး ကယ်ဆယ်ရေး ဝင်ပေးပါ။
Yangon Media Group added2new phot